CADEYN: DF Soomaaliya oo Masar kala wareegtay goob Waxbarasho oo ay gacanta ku haysay! Khilaafka miyaa keenay?
MUQDISHO(P-TIMES) – Warqad qoraal ah oo si weyn loogu wadaagay baraha bulshada ee Soomaalidu ku xariirto ayaa muujinaysa dalabka wasaaradda Waxbarashada, Hidaha & Tacliinta Sare ee dawladda Soomaaliya oo doonaysa in ay la wareegto Dugsiga Waxbarashada ee 15 May, oo ay horey gacanta ugu haysay dawladda Masar, kana mid ahaa heshiisyo ay kal hore gaareen labada dal.
Dugsiga 15-ka May, waxaa gacanta ku hayay oo maamulayay Guddiga Waxbarashada reer Masar ee Soomaaliya, waxaana sidaas oo kale dhiganayay Arday kala duwan oo Soomaaliyeed, iyadoo ay Xukuumadda Masar bixinaysay dhaqaalaha ku baxaya oo ay ku jiraan Macalimiin laga keenay dalkaas.
Warqadda qoraalka ah ee dawladda Soomaaliya, waxaa lagu cadeeyey in ay dawladdu la wareegayso dugsigan waxbarasho 20 April 2020-ka, waxaana aan la garaneyn in ay arrintan keentay khilaafka labada dal, gaar ahaana Masar oo ka carootay go`aanka dhexdhexaadka ah ee Soomaaliya ka qaadatay is heynta Itoobiya iyo iyada.
Xukuumadda Soomaaliya, waxay sheegtay in Iskoolkan 15-ka May ay ka dhigi doonto Machadka Tababarka Macallimiinta gabdhaha Soomaaliyeed, si sare loogu qaado Tayada waxbarashada ee Soomaaliya, laakiin ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo la bixiyey.
Dhawaan, wasiir kuxigeenka arrimaha dibada ee Masar ayaa tagay Muqdisho, wuxuuna la kulmay madaxda dawladda Faderaalka, oo ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan Is heynta Itoobiya & Masar, waxayna Xukuumadda Faderaalka go`aansatay in ay dhexdhexaad ka noqoto labada dal, maadaama Itoobiya ay Soomaaliya aad iskugu xiran yihiin.
Xiisada ka dhalatay is heynta Addis Ababa & Qaahira ee Biyaha wabiga NIILKA, ayaa cabsi laga qabaa in ay xumayso xariirka u dhaxeeya dawladda Faderaalka Soomaaliya & Masar, waxayna Qaahira doonaysa in ay hesho taageerada Muqdisho, laakiin taasi wey diiday Xukuumadda Faderaalka, waxayna u aragtaa in ay tahay dhexdhexaadnimo xalka ugu dhaw ee la qaadanayo.
Xariir dheer ayaa u dhaxeeya Soomaaliya & Masar, waxayna Qaahira mudo caawinaysay dalka Soomaaliya xiligii Xornimada, dagaaladii 1977dii iyo sidaas oo kale marar badan oo ay qeyb ka ahayd dadaalada dawlad dhisida Soomaaliya, laakiin Addis Ababa ayaa mar kasta leh saameynta ugu badan ee gudaha dalka.
Somaali iyo xabashi heshiis ma aha mana ahaan doonaan.
Waxaa heshiis ah farmaajo iyo Abey.
Xabashida Waxaa qorshaha ugu jira in ay dhisan biyaxireen cusub oo biyaha ka xiraya wabiyaasha shabeele iyo juba. Tolow yaa somaali la safan oo gacan ka siin arinkaas markii wakhtigeeda la gaaro.
Kenya waxay sameysay ka hortag oo waxay la safatay Masar iyo Suudaan waayo waxay kenya ka warhaysaa qorshaha “biya xireenka” ee ay etobia damacsantahay in ay ka dhisto wabiga Turkan ee labada wadan wadaagaan. Kasoo sababaya in uu qalalo laagta weyn ee loo yaqaano “Lake Turkana”
Qancinta farmaajo ee uu qancinayo ABEY waa khiyaano qaran iyo khiyaano saxiibada soo jireenka ah ee umada soomaaliyed, waana qaran dumisnimo wax lala simo jirin oo eef dheer ka dhaxlayaan umada soomaaliyeed.
Waa fursaddii ay Masaaridu lumiyeen
Laakiin waxaba masar ka maqan in Villa Somalia
Laga Xukumo Addis Ababa